उच्च शिक्षाको पाठ्यक्रममा पूर्विय दर्शनको आवश्यकता किन ? – Mission
उच्च शिक्षाको पाठ्यक्रममा पूर्विय दर्शनको आवश्यकता किन ?
वास्तवमा उच्च शिक्षा भन्नाले विभिन्न महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरुले प्रदान गरिने शिक्षा हो छोटकरीमा भन्दा विश्वविद्यालयका स्नातक तथा स्नातकोत्तर तह एवम् अनुसन्धान तहमा प्रदान गरिने शिक्षा हो । त्यसकारण यी तहहरुको पाठ्यक्रममा पूर्वीय दर्शन भित्रको हिन्दु दर्शनको आवश्यकता कि छ भन्ने विषयमा आधारित यो आलेख छ । पूर्वीय दर्शन भित्र चिनिया, भारतीय, कोरियन थाईल्याण्ड र म्यानमारका दर्शनहरु रहेका छन् । यी दर्शनहरु भित्रपनि विशेषगरी भारतीय र चिनीया दर्शनलाई विशेष मानिन्छ । यी दर्शन हाम्रो हावा पानी र माटो सुहाउँदो मूल दर्शन हुन । हाम्रो नेपाल र भारतीय दर्शन अन्तरर्गत हिन्दुवाद र हिन्दु दर्शनका न्याय, मिमांशा, वेदान्त जस्ता आस्तिक जयन चार आजविकि श्रवण, अविध्या जस्ता नास्तिक भारतीय दर्शनको जगम्य हो ।
विशेष गरेर जयन, कन्फसियस, ताओ, मोहि, कोरियन र चाईनिज जस्ता छिमेकी दर्शनको ठूलो हामीमा रहेको छ । नेपालको सन्दर्भमा बुद्धको बुद्धदर्शन मानिसहरुको कण कणमा अहिंसा र शान्तिको प्रायः बनेर रहेका छन् । मनको शान्ति हाम्रो जीवनशैलीको महत्वपूर्ण विकसित भनिएका ठूला देशहरुमा कमी तथा दुर्लभ जस्तै रहेको छ । ति देशहरुका झण्डै आधा भन्दा धेरै मानिसहरु डिप्रेसनमा रहेकाछन् । भौतिक रुपमा सबै चिज तथा वस्तु रहेको भएतापनि उनीहरुको मनमा अशान्ति हुँदा उनीहरु निरास छन् । त्यसकारण पनि उनीहरु हामीकहाँ भौतारिदै आएका हुन्छन् ।
हाम्रो दर्शन कला जीवन पद्धति हाम्रा अमुल्य साधन हुन् । यहाँ पूर्वीय दर्शनमा जीवन, जगत, शिक्षा कला र साहित्य विज्ञानका श्रेष्ठतम दर्शन रहेका छन् । हिन्दु धर्म दर्शनमा मात्र नभइ यसभित्र ज्ञान, विज्ञान, कला तथा साहित्यका दर्शनहरु पनि रहेका छन् । किनकि शिक्षा दर्शन सम्बन्धि भागवत गीतामा भनिएको छ ुपृथ्वीमा ज्ञान भन्दा शुद्ध चिज अरु केही छैनु फेरी भनिएको छ ुशिक्षा त्यो चिज हो जसले व्यक्तिलाई आत्मविश्वासी र निस्वार्थी बनाउँछु । शंकराचार्यले भनेका छन् ुआत्मानुभूती नै शिक्षा होु किनकि करीब पाँच हजार वर्ष पूर्व उपनिषदमा शिक्षा स्वतन्त्रताको लागि हो भनेर चर्चा गरिएको छ । गीताको मूल सन्देशमा भनिएको छ निष्काम कर्म गरको महिमा संसारमा आज उत्तिकै सान्दर्भिक रहेका छ ।
वैद्धिक समयमा पन्ध्रसय देखि सातसय विसीको समयमा तयार पारिएका ग्रन्थलाई वेद भनिन्छ । वेदमा आधारित दर्शनलाई वैदिक दर्शन भनिन्छ वेदहरु ऋग्वेद, यजुवेद, सामवेद र अथर्वगरी चार भागमा विभाजन गरिएको छ । पूर्वीय दर्शन वैदिक दर्शन हो । दर्शन अजर, अमर, अमृतमय, अभय असंसारिक, सर्वव्यापक, ज्योति स्वरुप नित्य, निर्विकार र शुद्ध चैतन्य रुपको हुन्छ । वृहत नायक उपनिषदमा भनिएको छ कि बोल्न नसक्नेलाई बोलने बानिकोे शक्ति दिने, मनले ग्रहण गर्न नसक्ने कुरालाई ग्रहण योग्य बनाउने, देख्न नसक्नेलाई दृष्टि शक्ति दिने, प्राणमा गति प्रदान गर्ने शरीरको स्वामी र इन्द्रियहरु अधिनता प्राप्त गराउने दर्शका आवश्यक तथा अनिवार्य पक्ष हुन् । पूर्वीय दर्शनले दर्शनको स्वरुप, दर्शनको विषय र दर्शनको उद्धेश्य सबैलाई आध्यात्मिक स्वीकार गरेको छ ।
मानिस संसारमा जन्मिछ उसको मृत्यु हुन्छ । त्यो राम्रो काम गर्ने मौका प्राप्ति पनि हो । मृत्यु शरीरको अन्त्य हो । मृत्युपछि मानव आत्म पशुपन्छि मनुष्य÷देवयोनीमा घुमिरहन्छ अतः यसखालको अमृत योनीलाई अमरत्वको साक्षरता बनाएर शोक सागरबाट मूक्ति प्राप्त गर्नु नै पूर्वीय दर्शनको उद्धेश्य हो । पूर्वीय दर्शनको सम्बन्ध कर्मसँग र कर्मसँगको सम्बन्ध जीवनसँग रहेको हुन्छ र दर्शनको सम्बन्ध मानव जीवनको कर्म, धर्म सबै सँग रहेको हुन्छ । पूर्वीय दर्शन एक नैतिक दर्शन हो । पूर्वीय दर्शनलाई आस्तिक र नास्तिक गरी दुई भागमा विभाजन गरिएको छ । सामान्य आस्तिक जसलाई परलोक वा पुनरजन्म विश्वास राख्ने मान्यता हो । परलोक र पुनरजन्ममा जसले विश्वास गर्र्दैैन त्यसलाई नै नास्तिक भनिन्छ । अत ः पूर्र्वीय दर्शन आस्तिक र नास्तिक दुवै विचारमा विभाजित रहेको छ । धार्मिक रुपबाट भन्दा पूर्वीय दर्शनमा आस्तिक र नास्तिक दुवै विचारका केही मत भेदहरु रहेको पाइन्छ । उदाहरणका लागि वौद्ध र जैन दर्शनले पुनरजन्ममा विश्वास गरेपनि यिनीहरु नास्तिक दर्शन मानिन्छन् । परम्परागत रुपमा हेर्दा ईश्वरवादी—ईश्वर मान्नेलाई आस्तिक र अनईश्वरवादीलाई नास्तिक मानिन्छ ।
वास्तवमा पूर्वीय दर्शनको भागवत गीता आफैँमा मूलतः व्यापक रहेको छ । जसलाई विश्वका अधिकांश मानिसहरुले अध्ययन गर्र्दै आएका छन् । यो संसारको पुरानो साँस्कृतिक महाकाव्य हो । पूर्वीय धर्म ग्रन्थले भनेको छ पूर्वीय भन्नाले भगवान र उहाँकै अंश राजा इन्द्र, पवन, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चन्द र कुवेर यी आठ अंशलाई मानिएको छ । जहाँ वेद गुरु, गायत्री, गीता र गाई आदिले पुनरजन्ममा विश्वास राख्नुलाई पूर्वीय भन्ने गरिन्छ । वास्तवमा पूर्वीय भइ जन्म लिन केवल संयोग मात्र नभई पूर्व जन्मको संस्कार र भगवानको विशेष अनुकम्पा पनि हो । वेदमा आधारित दर्शनहरु ६ वटा छन् जसको निचोडबाट हिन्दु दर्शनको अस्तित्व कायम भएको हो ।
वेदबाट निर्देशित हिन्दु दर्शनका मूलत ः षड्दर्शनहरु रहेका छन् । जसको संक्षिप्त चर्चा यसरी गरिएको छ न्याय दर्शन ः न्याय दर्शनका प्रणेयता महर्षि गौतम हुन् । तार्किक प्रणालिमा आधारित यथार्थवादी यस दर्शनले ईश्वर प्राप्तिका उपायहरु बताउदछ । सांख्य दर्शन ः यो ऋषि कपिलमुनिद्धारा प्रतिपादित दर्शन हो । यसले संसारमा अचेतना र पुरुष चेतना दूई मूल तत्वहरुको व्याख्या गर्दछ । योग दर्शन ः महर्षि पतञ्जलीद्धारा प्रतिपादित यस दर्शनले योगाभ्यासबाट विवेक प्राप्त हुने कुरा बताउँदछ । वैशेषिक दर्शन : महर्षिकर्णादद्धारा प्रतिपादित यस दर्शनले पनि ईश्वर प्राप्तिका उपायहरु बताउँदछ । मिमांसा दर्शन ः ऋषि दैमनीद्धारा प्रतिपादित यस दर्शनले वैद्धिक कर्मकाण्डको विवेचना गरेको छ । वेदान्त दर्शन ः महर्षिवादनारायण व्यासको ब्रह्मा सूत्रमा आधारित यस दर्शनले सम्पूर्ण कुरा दर्शन हो तर संसार मिथ्या हो भनेर चर्चा गरिएको छ । पूर्वीय दर्शन अन्तर्गत वेदलाई नमान्य ३ दर्शनहरु छन् जसलाई संक्षिप्त चर्चा यसरी गरिन्छ ।
चार्वाक÷लोकायत दर्शन ः यो पूर्णत ः भौतिकवादी दर्शन हो । जगत् सत्य हो, संसार वायु, अग्नि जल तथा पृथ्वी चार तत्वहरुबाट बनेको छ । चेतनाको उत्पत्ति भौतिक बलबाट हुन्छ । शरीर नै आत्मा हो, शरीर नष्ट भएपछि चेतना पनि नष्ट भएर जान्छ तसर्थ बान्चुन्जेल सम्म सुखसम्म सँग बाँच भन्ने सिद्धान्त हो । वौद्ध दर्शन ः गौतम वुद्धको उपदेशबाट उत्पत्ति भएको वौद्ध दर्शन वैद्धिक दर्शन र चार्वाक दर्शनबीच बाट चल्न खोजेको दर्शन हो । वृद्ध र रोगी र मृत्यु देखेर ज्यादै दुखी भई दुःखबाट मुक्ति प्राप्त गर्न महात्मा गौतम वुद्धले ज्ञानको खोजी गरेका थिए । उनका अनुसार चार आर्य सत्यहरु संसारका सबै प्राणीहरुमा दुःख छ, दुःखको कारण छ, दुःख निवारणको उपाय छ उनका अनुसार दुःख हटाउने उपायहरु छन् ।
दःुख शान्त छ, दुःख निवारणको उपाय छ जसका अनुसार दःुख हटाउने आठ उपायहरु यसरी उल्लेख गरिएको छ ः सम्यक् दृष्टि, सम्यक् संकल्प, सम्यक् वाक, सम्यक् क्रमान्त, सम्यक् आजिव, सम्यक् व्यायम, सम्यक् स्मृत्ति र सम्यक् समाधि । यी आठ वटा साधना गर्नाले अज्ञानता नष्ट भई पूर्ण शान्ति प्राप्ति हुन्छ । जैन दर्शन ः प्रथम जैन अधिकार बर्दमान महाविरको उपदेशबाट उत्पत्ति भएको दर्शन हो । यसको मूख्य विशेषता सबै दया भाव राख्नु रहेको हो । ईश्वरको अस्तित्वलाई नकार्ने यस दर्शनले पनि सांसारिक वन्धनबाट छुटकारा पाउन मोक्ष प्राप्त गर्न सम्यक् विश्वास, सम्यक वाक् र सम्यक् आचरणलाई त्रिरत्न मानेको छ ।
यो दर्शनले अपनाउने आध्यात्मिक श्रेष्ठता प्राप्त गर्न कुनै पनि व्यक्तिले पाँच गुणहरुको अंगिकार गर्नुपर्दछ । ती गुणहरु यसरी रहेका छन् ः अहिंसाः सबै प्राणी प्रति अहिंसा राखी हत्या नगर्नु, सत्य ःसधैँ सत्य बोल्नु, अस्तेयः चोरी नगर्नु, व्रह्माचर्यः शारीरिक र मानसिक सबै प्रकारका इच्छाहरु त्याग गरी आफ्नो बानी, विचार र कर्ममा शुद्धता ल्याउनु र अपरिगग्रह : सांसारीक वस्तुहरु, सोचहरु र इच्छाहरुको त्याग गरी आफ्नो बानी, विचार र कर्ममा शुद्धता ल्याउनु ।
ब्रह्माद्धारा सांख्यक दार्शनिक उपनिषदमा ॐ असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय , मृत्योरमा अमृत गमय । ॐ शान्ति ः शान्ति ः शान्ति ः !!! भनिएको छ । जसको अर्थ हुन्छ असत्यबाट सत्यको नजिक लैजाउ अन्धकारबाट प्रकाशको नजिक लैजाउ मृत्युबाट अमरतोको नजिक लैजाउ यो नै जीवनको लागि उत्तम मार्गदर्शन हो । वास्तवमा हामीसँग यस्ता दर्शनको भण्डार नै छ । बाहिर ल्याउन र प्रयोगमा ल्याउन नसकेको मात्र हो । दर्शन र शिक्षा दुवै एक अर्कामा अन्योन्याश्रित छन् दर्शन विना शिक्षा र शिक्षा विना दर्शनको कुनै अर्थ रहदैन । त्यसैले फिक्टे (ँष्अजतभ) को भनाइ छ ुशिक्षा, कला दर्शन शास्त्रको सहायता विना प्रकटता र स्पष्टता प्राप्त हुन सक्दैनु ।
दर्शन र शिक्षा दुवै एक अर्कामा परिपूरक छन् किनभने शिक्षाले दर्शनको आधारमा नै उद्देश्यहरुको निर्माण गर्दछ तथा उद्देश्यहरुको आधारमा नै पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक शिक्षण विधि प्रक्रिया एवम् मूल्याङ्कन निर्माण गरिन्छ । व्यक्तिको जीवन दर्शनमा परिवर्तन हुने वित्तिकै शिक्षाको उद्देश्यमा पनि परिवर्तन हुन्छ । यस सम्बन्धमा जेन टाइले भनेका छन् ुदर्शनको साहयता विना शिक्षा सही मार्गतिर अग्रसर हुन सक्दैनु । दर्शनलाई शिक्षाको सैद्धान्तिक पक्ष मानिन्छ भने शिक्षालाई दर्शनको व्यवहारिक पक्ष मानिन्छ ।
किनभने प्रतिपादन गरेका सिद्धान्त र मूल्य मान्यताहरुको प्रयोग मानव हितका लागि गर्ने काम शिक्षाले गर्दछ । यस सम्बन्धमा रोशको भनाइ छ ुदर्शन र शिक्षा एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन्ु दर्शन र शिक्षाका सम्बन्धमा प्रष्ट पार्दै जोन एडम्स भदन्छन् ुशिक्षा दर्शन गतिशिल पक्ष हो यो दार्शनिक चिन्तनको सक्रिय पक्ष र जीवनका आदर्शहरु प्राप्त गर्ने प्रयोगात्मक साधन होु यस प्रकार दर्शनले लक्ष निर्धारण गर्दछ भने शिक्षाले लक्ष पुरा गर्ने साधनको रुपमा काम गर्दछ । दर्शनले समस्याहरु देखाउदछ भने शिक्षाले समस्या समाधानका लागि कार्य गर्दछ । एउटा शिक्षक तथा प्राध्यापकले शिक्षाको माध्यमद्धारा नै दर्शनले पत्ता लगाएका धारणा र विश्वासहरुलाई विद्यार्थी समक्ष पस्किएर उसको व्यवहार परिवर्तन गरेको हुन्छ । दर्शनद्धारा प्रतिपादित सिद्धान्तको प्रयोगशाला घर, परिवार, समाज, समुदाय, विद्यालय तथा विश्वविद्यालय हुन् । शिक्षाशास्त्री जोन.डिवेले भनेका छन् ुदर्शन भनेको शिक्षाको सामान्य सिद्धान्त हो ।
निष्कर्षमा भन्नु पर्दा हामी मानवमा व्यक्तिवादी मात्र नभइ समग्रतावादी, भौतिकवादी नभइ आध्यात्मवादी, अवास्तविकतावादी नभइ यथार्थवादी, पदार्थवादी नभइ चेतनावादी, अनिश्वरदादी नभइ ईश्वरवादी हुनुको कुनै विकल्प देखिदैन । जीवन समग्रतामा रहन्छ । हामीमा मानवतावादी सोच, चिन्तन,विचार तथा दृष्टिकोण हुनु आवश्यक छ । हामीसंग भएको सनातना धर्म र धर्मग्रन्थलाई समय सन्दर्भ, आवश्यकता तथा सान्दर्भिकताको आधारमा सुधार,परिमार्जन, परिस्कृत गर्दै मानवीय जीवनमा अंगाल्नु छ । असल नागरिक तथा चरित्रवान भएर शान्त र समृद्ध बनाउनु छ । यसको लागि हाम्रा प्राचीन ग्रन्थ वेद, उपनिषद, श्रीमदभागवत गिता, त्रिपिटक, रामायाण, महाभारत, कौटिल्यको दर्शन, जातक, पञ्चतन्त्र, मनु स्मृति लगायत समग्र पूर्वीय ज्ञान तथा विज्ञानलाई आधुनीक समयमा विज्ञान र प्रविधिसंग जोडेर उच्च शिक्षाको पाठ्क्रममा समावेश गर्नु आवश्यक छ ।
यसका लागि हालको युवा जनशक्तिमा पूर्वीय दर्शनमा आधारित हिन्दु दर्शन प्रणालीमा आधारित शिक्षा व्यवस्था र पाठ्यक्रम कसरी समायोजन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने तर्कको बहस, पैरवी, गोष्ठि, सेमिनार जस्ता कार्यक्रम हिल्डातावाको आवश्यकताको पहिचानको चरणलाई प्रयोग गरेर उच्च शिक्षाको पाठ्यक्रममा प्रयोगर्नु आजको अनिवार्य आवश्यकता छ । यसका लागि सरकार, सरकारी नीतिमा आमुल परिवर्तन ल्याएर सरोकारवालाहरु बुद्धिजीवी, प्राध्यापक, शिक्षक, विद्यार्थी, ज्ञान, उत्पादन, विज्ञान, शिक्षण पद्धतिलाई दर्शनले विशिष्ट गरेबमोजिम मन, वचन र कर्मले निष्ठ भई सबै लागि पर्नु आवश्यक छ ।
हाम्रो ज्ञान लुकेको विज्ञान र धर्म सभ्यतालाई प्रायोगिक, पक्षका ढाल्नु अनिवार्य छ । उच्च शिक्षामा पूर्वीय दर्शनले आज राष्ट्रको आफनो पहिचान र त्यसबाट जीवनरस लिने शिक्षाको आवश्यकता रहेको छ । आज स्वदेशी शिक्षा, जीवनमूल्य मर्म, स्व भाषा संस्कृति प्रति आत्महिन भावबाट नागरिकलाई जोगाउन सकिएन भने भविष्यमा यो दर्शनमा ठूलो दुर्घटना हुने संम्भावना रहन्छ । स्वदेशी प्रति हिनता तथा विदेशी प्रति अतिरिक्त आकर्षक पैदा गराउने वर्तमान शिक्षाले राष्ट्रिय स्वाभिमान र आत्मनिर्भरतालाई नष्ट गर्दै गईरहेको यो परिवेशमा उच्च शिक्षामा पूर्वीय दर्शनलाई शिक्षाको आधार मानेर सोहि अनुसार पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षण विधि तथा पद्धतिहरु आधुनीक ज्ञान तथा विज्ञानलाई समेत समेटेर निर्माण गर्नु पर्दछ । नत्र भने आजको समयमा कोभिड १९ ले जसरी आम मानवमा विकराल अवस्थाको सिर्जन गरेको त्यो भन्दा पनि बढि समसया यसले निम्त्यिाउने कुरामा कुनै दुईमत रहेको छैन । त्यसैले यसको पूर्ण नेतृत्वसम्बन्धित विश्वविद्यालयहरु, विद्यालयहरु तथा विद्यापिठले लिएर तत्काल यसको बहस तथा पैरवी बढाउनु पर्दछ । हाम्रा प्राध्यापक, शिक्षक, बुद्धिजीवी, विद्दान, दार्शनिक, वैज्ञानिक, धर्मशास्त्री तथा संस्कृती विदहरुले यसको जिम्मा लिनु अनिवार्य आवश्यकता छ । यो काम ढिलो हुन लागि सकेकोले जति सक्यो छिटो एकमतका साथ काम सुरु गरौ ।
लेखकः एकराज शर्मा मध्पश्चिम विश्वविद्यालय बागेश्वरी बहुमुखी क्याम्पस कोहलपुर पाठ्यक्रम तथा मूल्याङ्कन विभागकको विभागीय प्रमुख हुन ।
प्रकाशित मितिः शुक्रबार, जेष्ठ २८, २०७८ 7:32:08 AM |
Posted in Flash news, विचार
Prevनेपालले आज अस्ट्रेलियासँग खेल्दै
Nextघटे कोरोना परीक्षण गर्ने